နေခြည်မှာရွှေ့ရည်မလောင်းနိုင်ရှာသောသမီးလေးများ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » နေခြည်မှာရွှေ့ရည်မလောင်းနိုင်ရှာသောသမီးလေးများ။
Posted by Pearl May on Jun 10, 2011 in My Dear Diary | 10 comments
လူလွတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် တူမလေးတွေကို ကျွေးမွေးထိန်းကျောင်းလာတဲ့ကျမ ကလေးတွေကိုသိပ်ချစ်တယ်။ ကလေးတွေမြင်ရင် ချမ်းသာတဲ့ကလေးဖြစ်ဖြစ် ဆင်းရဲတဲ့ကလေးဖြစ်ဖြစ် အလိုလိုနေရင်းသနားတတ်တာ။ သွားရင်းလာရင်း တောင်းစားတဲ့ကလေးတွေ မိုးရွာနေပူထဲမှာ ပင်ပန်းနေတဲ့ကလေးတွေမြင်ရင် မျက်ရည်အလိုလိုဝဲလာရော။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးဆိုရင် ပိုသနား ပို ချစ်တယ်။ တတ်နိုင်သလောက်လည်းအမြဲကူညီအားပေးခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးပိတ်ရက် မေမေခေါ်လို့ဈေးလိုက်သွားတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဓိကထားရောင်းတဲ့ဈေးပါ။ ဈေးထဲဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲ သမီးလေး ၃ ယောက် ကွမ်းရွက် ဗန်းကလေးတွေကိုင်ပြီး ကွမ်းရွက် ရောင်းနေတာ တွေ့တယ်။ ကလေးလေးတွေက အလည်လေးတွေ ၁၀ နှစ် ၁၁ နှစ်လောက်ရှိမယ်။ အိမ်က တူမအကြီးလေးနဲ့ရွယ်တူလောက်ပဲ။ သူတို့ကို ကျမစိတ်ဝင်တစားကြည့်လိုက်တာသူတို့သိတယ် ။ သမီးလေးတစ်ယောက်ပြေးလာပြီး အန်တီ ကွမ်းရွက် ဝယ်ပါတဲ့။ အိမ်မှာ ကွမ်းရွက်မလိုပေမယ့် ကျမထုံးစံအတိုင်း တတ်နိုင်သလောက်လေး အားပေးကူညီချင်လို့ဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာမယ်နော်လို့ပြောပြီး မေမေဝယ်ချင်တာ တွေအရင်လိုက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ် ။ ပြန်ထွက်လာတော့ ခုနကသမီးလေး ပြေးထွက်လာတယ်။ ကျမနားရောက်တော့ ကွမ်းရွက် တစ်ထပ် ယူလိုက်ပြီး အန်တီ ၁၀၀ ပဲပေးပါတဲ့။ ကျမက တစ်ဗန်းလုံးယူမယ် သမီး ဆိုတော့ ၂၀၀ ပေးပါတဲ့။ အေး အေး ဆိုပြီး ပိုက်ဆံပေး ကွမ်းရွက်ယူပေါ့။ မေမေကတောင် ဒီလောက် ကွမ်းရွက် အများကြီး ဘာလုပ်မှာတုန်းတဲ့။ အိမ်နားမှာဝေလိုက်မှာပေါ့မေမေရယ် ကလေးတွေရောင်းတဲ့ပစ္စည်းမြန်မြန်ကုန်တော့ အိမ်မြန်မြန်ပြန်နားရတာပေါ့လို့ပြောပြီး အဲဒီကလေးတွေကို မျက်စိဝဲကြည့်လိုက်မိတာ……အဲဒီမှာတွေ့တာပဲ။
ကွမ်းရွက်ရောင်းတာ ကျမပြောတဲ့ ကလေး ၃ ယောက် ကတစ်ဖွဲ့ ၊ သူတို့ကထိုင်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူး ဗန်းကလေးတွေကိုင်ပြီး မတ်တပ်ရောင်းတာ။ သူတို့ကျော်ကျော်လောက်မှာက ထိုင်ရောင်းတဲ့ ကွမ်းရွက်သည်ရှိလိမ့်မယ်။ တောင်းကလေးမှောက်ပြီး ကွမ်းရွက်ဗန်းကြီးတင်ထားတယ်။ ရောင်းတဲ့သူကတစ်နေရာရာသွားနေတယ်ထင်တယ် မရှိဘူး။ ကျမကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကလေး ၃ ယောက်ထဲကတစ်ယောက်က လက်ကလေးပိုက်ပြီး ကွမ်းရွက်ဗန်းကြီးနားကိုရွေ့ရွေ့သွားနေတယ်။ ကျန်နှစ်ယောက်က ဆော့တာလိုလို ရန်ဖြစ်တာလိုလိုနဲ့အော်ပြီး ပြေးလွှားနေတယ်။ (ကျမအထင်လူတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအာရုံစိုက်ပြီး ကွမ်းရွက်ဗန်းကြီးနားက ကလေးကိုသတိမထားမိအောင်လုပ်နေတာလို့ထင်တယ်)။ အဲဒီမှာ ကွမ်းရွက်ဗန်းကြီးနားက ကလေးက ကိုယ်ကိုနည်းနည်းစောင်းလိုက်ပြီး လက်ပိုက်တားတဲ့အနေအထားနဲ့ပဲ ကွမ်းရွက်တစ်ထပ်ကို ဆတ်ကနဲကောက်ယူလိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ လက်ကလေးပိုက်ရက်နဲ့ပဲ ပြေးနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဆီကို သူကပါပြေးသွားပြီး ကလေးတစ်တစ်ယောက်ကိုင်ထားတဲ့ ကွမ်းရွက်ဗန်းကလေးထဲ သူယူလာတဲ့ကွမ်းရွက်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ သူတို့ mission complete ။ မဆော့ကြတော့ပဲကျမခုနကဈေးထဲဝင်လာတုန်းကလို တန်းစီပြီးဟန်မပျက်ဈေးဆက်ရောင်းနေလေရဲ့။
အစအဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့ ကျမကတော့ ဒီသမီးလေးတွေရဲ့အနာဂါတ် ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းပဲတွင်တွင်ချမိတော့တယ်။ စာသင်ရမဲ့အရွယ်မှာ ဝမ်းစာရှာရင်း ဒီလိုအတတ်တွေ မသင်ယူရပဲတတ်မြောက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက် ကျမတို့တစ်ခုခုတော့ဆောင်ရွက်သင့်ပြီထင်ပါတယ်။
နောက်ကို ထပ်တွေ့ ရင် အဲဒီ ကလေးမ လေး တွေကို ခေါ်ပြီး ပြေတီဦးတို့ ရဲတိုက်တို့ တည်ထောင်ထားတဲ့ ပညာရေးအတွက် စပွန်ဆာ ပေးတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း ကို လိုက်ပို့ ပေးလိုက်ပါလား ဗျာ လို့ အကြံလေး ပေးလိုက်ပါရစေလား ။ ပညာရေးအတွက် အပြည့်အစုံ ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း တွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ ။ ပြေတီဦး၊ရဲတိုက် တို့ လို့ သုံးလိုက်တာ က သိထားသလောက် လေး ကို ပြောတာနော် ။
ဒီလိုကလေးတွေကိုမြင်ရင် စိတ်ထဲမှာ တကယ်ကို မကောင်းဘူး သူတို့တွေရဲ့ ဘဝလေးတွေက ဒီလိုလုပ်ဖို့ဖြစ်လာတော့ မသင်ပဲနဲ့ တက်ခဲ့တဲ့ ဒီလိုပညာတွေနဲ့ မိဘကိုတဖတ်တစ်လမ်းက ကူညီနေရှာတယ်ထင်ပါတယ် .
မိဘတွေက ကလေးတွေကို ပရိးမီးယားလိဂ်ကဘောလုံးသမားမျာုးလိုအငှားချပြ၊ီးစားနေကြတာပါ၊
နောက်ရေးထက် လတ်တလောပြေလည်ဘို့ကို ပိုဦးစားပေးနေကြရတာပါ။
အန်ကယ်ပေါက် ။ ကျုပ်တို့ မန်းတလေး မှာ ပိုက်ဆံ စားစရာ လိုက်တောင်းတဲ့ ကလေးလေး တွေ ရှိတယ်လေ ။ သူတို့ က ၂ နှစ်သား ကလေး တွေ ကို ပွေ့ ထားပြီး လိုက်တောင်းကြတယ် ။ ၂ နှစ်သား ကလေး တွေ ကို ဘာမီတွန် တွေ ကြိတ်တိုက်ထားတော့ ၂ နှစ်သားလေး တွေ ခဗျာ မှိန်းလို့ ။ ဘာအသံ မှ ကို မထွက်တာ ။ အဲဒါ သူ တို့ ကို မုန့် ဖိုးလေး ပေးပြီး အင်တာဗျူး ပါလား ဗျ ။ ဓါတ်ပုံပါ ရိုက်ရတာပေါ့ဗျာ ။ ရွာသူ ရွာသားတွေ အတွက် လိပ်တက်နယူး တစ်ပုဒ် ရတာပေါ့ နော် ။ စိတ်မဆိုးနဲ့ နော် သားအိုင်ဒီယာ ကို ။
ကိုယ်ဓါတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ခိုင်းစားနေတဲ့လူမိုက်က ၀င်ရိုက်သွားမှာကြောက်လို့ဗျို့။
၂၀၀၀-၂၀၀၁ ၀န်းကျင်လောက်တုန်းက ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုဒ် happy world ဘေးကနေ မပာာဝိဇယစေတီအထိ လမ်းတစ်လျှောက် ခိုစာရောင်းတဲ့ကလေးတွေတော်တော်များများရှိခဲ့ကြတယ် (ခုရှိမရှိတော့မသိတော့ဘူး) ဘေးကဖြတ်သွားရင်ခိုစာလိုက်ရောင်းကြတယ်.. ဒီအထိအဆင်ပြေသေးတယ် လက်ထဲမှာစားစရာပါလာရင်တော့ အဲ့ဒီမုန့် ကလေးကျွေးခဲ့ပါလားလို့ တောင်းကြတယ် ..တခါက ရေခဲမုန့် စားနေတာကိုဝိုင်း တောင်းကြတယ် (သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားတာ ၂ခါ ၃ ခါလောက်အထိ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်) ပေးရလည်းအခက် မပေးရလည်းအခက် … သူတို့ အစားကိုယ်ကစိတ်မောမိတယ်. သူတို့ ကို ကြည့်တော့ အုပ်စုလိုက်ပျော်လို့ ပြုံးလို့ …